Nanjing Jianke Machinery Co., Ltd yanda kancane kancane phakathi omunye abahlinzeki phezulu umshini ithuluzi umkhakha emhlabeni. Yaqalwa ngo-1993, JIANKE igxile Ekhiqizako I-Swiss uhlobo lathe othomathikhi ukwenziwa encane, eziyinkimbinkimbi nokunemba izingxenye zensimbi ngaso sonke isikhathi.
Kuze kube manje, siba ezintathu izinhlobo Swiss-uhlobo lathe othomathikhi, Z chungechunge, M uchungechunge kanye W chungechunge, okungase ukwanelisa izidingo ngamazwe ezivela emikhakheni ehlukene: Aerospace, ezempi, wezokwelapha, izingxenye auto, njll.
Zonke imishini JIANKE zisekelwe ubuchwepheshe bakamuva nje kanye izingxenye, ezifana lokuphotha amabombo, ukuqondisa ujantshi Servo motors kukhona ngqo kusuka nabaphakeli phezulu abadumile. Ekubunjweni embhedeni futhi izingxenye machined by imboni bethu ukuze kuqinisekiswe izinga kakhulu.
JIANKE singaphoqi umgomo 'siphishekele imikhiqizo emihle kakhulu, ukukhonza ezimakethe zomhlaba. " Onjiniyela bethu sifuna ukuthuthukisa umshini kahle, umshini ngokunemba kanye umshini ukuphepha. onjiniyela yensiza ezizinikele ekusizeni amakhasimende ethu thola elilungile ayiqoshwa eshalofini noma ngokwezifiso amisiwe umshini JIANKE CNC isixazululo ukuletha esiphezulu kwemikhiqizo lifakazelwa kanye nezindleko-ukonga.
Kususelwa ifilosofi ibhizinisi "kwekhwalithi lokuqala, idumela kuqala", JIANKE uzibophezele ekuhlinzekeni aziwayo, inkonzo ephelele, isixazululo professional.